Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ ≥98% | AASraw Anabolics Steroids
/ ngwaahịa / Anabolics Steroids / Testosterone ntụ ntụ / Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ
2.67 si 5 dabere na 3 ahịa Fim
Categories: Testosterone ntụ ntụ, Anabolics Steroids
AASraw nwere njikọ na mmepụta ikike sitere na gram ka usoro nhazi nke Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ, n'okpuru usoro CGMP na usoro njikwa mmachi.
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ ndị na-ere ngwaahịa bụ ihe na-ewu ewu nke testosterone (ngwakọta) ma na-ajụ ajụjụ banyere ihe ngwakọta kachasị mma na nke a maara nke ọma (3: 6: 6: 10).
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ video
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ isi Characters
aha: Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ na - eji usoro steroid
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ na-akpọ Sust, Testo Sust, Sust 250, Testo ngwakọta.
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ Usage
Sustanon dosing n'oge steroid steroid kwesịrị n'ụzọ zuru oke na-ekewa n'ime ọ dịkarịa ala abụọ injections kwa izu, na ihe mma ọ dịkarịa ala atọ.
(1) 250 mg kwa izu
Nke a bụ oke dị ala ma a na-ejikarị ya agwọ ndị na-arịa obere testosterone. Maka otutu ndi mmadu nwere ogo ma obu elu nke testosterone agaghi enwe otutu mgbanwe anya. Nsogbu nke usoro onyonyo bụ na ọ ga-emechi mmepụta ihe nke testosterone na-enweghị uru ndị ọ na-emekarị maka usoro ọgwụ steroid nkịtị.
(2) 500 mg kwa izu
Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ uru dị mma, nke a bụ ọkwa kachasị dị ala. Mkpụrụ ọgwụ a na-ebute nsonaazụ dị mma na nke mbụ, ọ dịghịkwa mkpa ịchọta ngwaahịa ọzọ iji chịkwaa ogo nke estrogen. Otú ọ dị, ọ bụ ihe amamihe dị na ọtụtụ oge na ị na-enweta ngwaahịa estrogen control.
(3) 750 mg kwa izu
Ụdị usoro ọgwụgwọ a na-eme ka mgbanwe dị ịrịba ama ga-apụta ìhè maka ihe doro anya mana dose a chọrọ ka ị nweta ngwaahịa iji chịkwaa estrogen. Ọ bụrụ na a na-achịkwa etiti estrogen ahụ mmetụta ahụ dị obere.
(4) 1,000 mg kwa izu
Nke a bụ oke dị elu ma dị ezigbo mkpa maka ndị ọrụ ọrụ dị elu na nke etiti. Ụfọdụ ndị ọkachamara na-eji usoro dị oke elu karịa nke a, Otú ọ dị, achọrọghị ma ọ bụrụ na ịchọrọ na nsonaazụ ahụ adịlarị.
Ịdọ aka ná ntị na tebụl Testosterone Sustanon 250
Sustanon nwere mmetụta nke aromatrị dị arọ n'ihi ya, ọ ga-abụ na akụkụ ahụ bụ na testosterone ga-aghọzi estrogen. Ọganihu a na ogo nke estrogen ga-ebute nsogbu dị ka mmepe nke ara na ụmụ nwoke na idebe mmiri dị ukwuu. Nke a nwere ike ibute ọbara mgbali elu.
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ bụ isi testosterone jere ozi na efere dị iche iche, ọ na-ewu ewu n'etiti bodybuilders. Emepụtara ya maka HRT, ebe ọ na-enye ohere ịnweta nanị otu ogwu kwa ọnwa. Otú ọ dị, site na nnukwu ọchịchọ na bodybuilders nwere ọkwa dị elu nke testosterone n'ọbara, a naghị ahụ nnukwu uru a n'ihi na ha na-etinye Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ kwa izu.
Ebe ọ bụ na steroid bụ testosterone, mmetụta mmetụta nke estrogenic pụrụ ịbụ ihe a ma ama, na njigide mmiri nwere ike ime. N'ihi ya, a na-ejikarị ya eme ihe dị ka oge na-aga n'ihi na ọ ga-enye puffy mass.bulking AAS n'oge
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ na-enye ọtụtụ n'ime uru na mmetụta dị n'akụkụ testosterone. Ya mere, ọ bụrụ na bodybuilder nwere ahụmahụ na testosterone, Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ kwesịrị ịbụ iji jiri steroid dị mfe.
Testosterone Testosterone Sustanon 250 oke ntụ
Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ Marketing
Esi zụta Testosterone Sustanon 250 ntụ ntụ si AASraw
Testosterone Testosterone Sustanon 250 Raw ntụ ntụ ntụziaka:
Testosterone Sustanon 250 uzuzu maka ozuzu: 18 nzuzo ị ga-ama !!!